Yokusetshenziswa "retinol acetate" ikhomba izidakamizwa njengoba ithuluzi dermatoprotektornoe ukuthi ngempumelelo kuvimbela keratinization, kuvusa ukukhishwa isikhumba kuvimbela ukuthuthukiswa hyperkeratosis. Ngaphezu kwalokho, lokhu izidakamizwa kuvusa division lamaseli EPITHELIAL futhi kunomphumela ophawulekayo tonic. Phakathi kwezinye izinto, yokusetshenziswa "retinol acetate" libonisa ukuthi lokhu dermatoprotektornoe kusho uhileleke ngokuqondile kuzo zonke izinhlobo izinqubo redox ku zamagama amaprotheni, mucopolysaccharides futhi lipids ngesikhathi kumiswa cholesterol nokumbiwa umzimba. Iphinde ngokunenzuzo kuthinta umsebenzi izithukuthuku, lacrimal kanye nezindlala sebaceous, izikhathi eziningana kwandisa ukukhiqizwa lipase, oyenza cell division kanye myelopoiesis.
"Retinol acetate": Ukwakheka, intengo
izindlela Iyatholakala "retinol acetate", intengo okuyinto, ngokwesilinganiso, phakathi ruble amabili namashumi ayisithupha ngesimo gelatin amaphilisi, elithambile ophuzi noma oily uketshezi oluphuzi omnyama noma ukukhanya umthunzi ophuzi. Ukwakheka zingozi zihlanganisa BHT futhi deodorized amafutha sunflower. Ngaphezu kwalokho, kudingeka uwoyela CONCENTRATE iqukethe izinto retinol acetate. Yokusetshenziswa futhi ibonisa ukuthi imfuyo elikhona ukubunjwa amaphilisi. Ngaphezu kwalokho, dragees aqukethe amafutha sunflower, gelatin, glycerin, amanzi ahlanzekile, methyl parahydroxybenzoate kanye udayi ophuzi.
Sebenzisa leli thuluzi ngokuvamile dermatoprotektornoe ochwepheshe batusa for ekwelapheni beriberi, hypovitaminosis A kanye nesimungumungwane.
Abantu abaphethwe isifo sohudo, ukucinana kwemigudu yokuphefumula noma tracheitis, futhi incoma ukuthatha leli bhukwana imithi imfundo. "Retinol acetate" kumele kusetshenziswe ngesikhatsi ukwelashwa Umkhuhlane, izifo sibi zokuphefumula, inyumoniya, xerophthalmia, retinitis pigmentosa , futhi yamathambo. Ngaphezu kwalokho, ukulungiswa lubaluleke ku dyskeratosis follicular, ichthyosis, isifo bronchopulmonary, isifo sokusha hepatic, psoriasis, isikhumba isifo sofuba, wegazi, izimila EPITHELIAL futhi keratosis actinic. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa le-ejenti kuba nomphumela omuhle kwezinye izinhlobo eczema, ukusha, frostbite, izilonda ukuvuvukala futhi esidalwa yizilonda emathunjini sibe yokusetshenziswa pheshana emathunjini.
Yabela izidakamizwa esebenzayo akuyona ikakhulukazi Kunconywa lapho ezifakelwe iguliswa isiguli iyiphi ingxenye elikhona ukwakheka, kanye hypervitaminosis A. Abesifazane walowo obeletha, weluleka efanayo ukuqala ukuwamukela izindlela dermatoprotektornogo lokhu bhukwana imfundo. "Retinol acetate" akufanele isetshenziswe uma amafomu okukhulu izifo zesikhumba ukuvuvukala, pancreatitis ezingalapheki, noma cholelithiasis. Ngokunakekela okukhulu wasebenzisa isidakamizwa i-ukumelwa inhliziyo, futhi nephritis.
'Materna' - amavithamini omama
Amavithamini izinwele futhi okuphikisana zabo - "Pantovigar"
Lapho udinga isehlukaniso ezinkantolo?
Sauna "Atlantis" waseChelyabinsk: i Uhlolojikelele, izici, amasevisi kanye nokubuyekeza
Ukuhunyushwa kwephupho: Isiphi isibhamu esikuphuphayo
Umsebenzi Olukhulu kungase kukwenze wephuze ukuguga by engu-10
Dmitry Miller: Biography, Filmography, empilweni yakho
Susa uhlelo, indlela ukubuyisela? Indlela ukuze alulame ifolda asusiwe kanye nohlelo
Umgibeli American Scott Fischer, abanqoba isiqongo Lhotse: Biography
Ufuna ukwazi ukuthi ukugubha imfundiso kaZiqu-zintathu? Funda i-athikili yethu!